Nezve - Central Language School, Cambridge
Nezve Chikoro chedu
Chikoro chedu chakavambwa mu1996 neboka revaKristu muCambridge. Tine mukurumbira wekuchengeta kwakanakisa mukati nekunze kwekirasi. Vadzidzi vazhinji vanoti chikoro ichi chakaita semhuri.
Isu tiri padyo nezvitoro zveguta, maresitorendi, mamuseum, makoreji eYunivhesiti yeCambridge uye chiteshi chebhazi. Isu tinowanikwa padyo nekereke yakanaka yedombo.
Chinangwa chedu ndechekukugamuchira noushamwari uye mukana wakazonaka wekudzidza Chirungu munzvimbo ine hanya, ine hushamwari. Makosi edu anomhanya mukati megore rose uye iwe unogona kutanga chero vhiki. Isu tinopawo kugadzirira bvunzo. Isu tinongodzidzisa vanhu vakuru (kubva pazera remakore gumi nemasere).
Vadzidzi vanobva kune anopfuura 90 nyika dzakasiyana vakadzidza nesu uye kazhinji panowanzova nemusanganiswa wakanaka wemarudzi uye hunyanzvi muchikoro. Vadzidzisi vese ndevatauri vemo uye CELTA kana DELTA vanokwanisa.
Isu tiri kutarisira chikoro zvinoenderana neUK UK Hurumende uye Chirungu UK nhungamiro, kutora matanho ese anodikanwa kuitira kudzivirira kupararira kweCovid-19.
Tiye chikoro chakanyoreswa Charity (Reg No 1056074) ine bhodhi reMatirastii vanoita munzvimbo yekupa mazano. Iye Director weStudies uye Senior Administrator vane basa rekumhanya zuva nezuva kwechikoro.
British Council Kubvumidzwa
'British British Council yakaongorora uye yakagamuchirwa Central Language School Cambridge muna April 2017. Iyo Accreditation Scheme inoongorora mitemo yehutungamiri, zvigadzirwa uye nzvimbo, dzidziso, hutano, uye kubvumirwa masangano anowirirana nehuwandu huwandu munharaunda imwe neimwe inoongororwa (ona www.britishcouncil.org/education/accreditation kune mamwe mashoko).
Ichi chikoro chemutauro wega wega inopa zvidzidzo muGeneral Shona kuvanhu vakuru (18 +).
Simba rakaratidzwa munzvimbo dzehutano hwehutano, kutarisira zvidzidzo, kuchengetedza vadzidzi, uye mikana yekuzorora.
Mushumo wokuongorora wakataura kuti sangano rakazadzisa maitiro eSuite. '
Kuongorora kunotevera kunowanikwa muna 2022
Cambridge inozivikanwa pasi rese kune yayo University, nhoroondo, runako, kugona pachikoro uye hupenyu hwevadzidzi. Shanyira makoreji uye...	Read More
Kuzvipira kweCentral Mutauro kuzvipira kuri kukubatsira kuti utore mukana wenguva yako muCambridge, uchifarira yako...	Read More
Heano mamwe emabasa atinowanzo sanganisira, asi parizvino iwo anoenderana necovid-19 zvirambidzo, pane iyo...	Read More